Tsigiro & Sevhisi - Shandong Kingoro Machinery Co., Ltd.
Pindura mibvunzo yevatengi uye suma zvigadzirwa nemasevhisi
Tine nyanzvi dhizaini timu uye yatogadzira akawanda akabudirira mapepa emutsara mapurojekiti kutenderera pasirese. Tichagadzira mapurojekiti akasarudzika zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, mbishi, fekitori, bhajeti zvakanyanya.
Saina Chibvumirano cheMabasa Ekugadzira, chakagadzirwa pakukumbira, chinogona kugadziridzwa.
Iyo midziyo inorongedzwa uye yakarongedzwa mumidziyo uye inoendeswa kuchiteshi.
Isu tinopa kuisirwa sisitimu, kugadzirisa uye kushanda basa rekudzidzisa kutenderera pasirese
24 * 7h Email, Kutaurirana Nhare, Onsite Kuongorora, gadzirisa matambudziko ako nekukurumidza
Shanyira vatengi 'fekitori, ongorora mbishi zvigadzirwa uye kubatsira vatengi kuronga zvakanakisa chirimwa.
Tekinoroji Kuvandudza & Kugadzira
Dhipatimendi redu reR & D rinotaurirana nguva nenguva nedhipatimendi rekutengesa uye mushure mekutengesa dhipatimendi, kuunganidza mibvunzo inoshungurudzwa nemutengi zvakanyanya, kukwidziridza nekugadzira michina zvinoenderana.
Tine nyanzvi QC dhipatimendi kuti mukanyatsochengeta kudzora kunaka ose chete mashoko ari kugadzirwa kwacho, kusanganisira mbishi zvinhu kutenga, kugadzirwa zvakanaka, ose chete kupembedza zvikamu, muchina zvikamu gungano uye pakusununguka.
Yemahara Raw Chinyorwa Bvunzo, Tinogona kuita emahara mbishi yezvinhu bvunzo kwauri.Iwe chinongoda kutumira yako mbishi zvinhu kwatiri, uye isu tichawana nzira yakanakisa yekugadzira mapeti nayo.
Mhuka Dyisa Pellet Mill, Wood Crusher, Bhandi rinotyairwa Hammer Mill, Vachikuya muchina wehuni, Bindu Wood Chippers, Nyundo Mill NeDutu,